झुटो न्याय !- विचार - कान्तिपुर समाचार
लहड वा प्रतिशोधका नाममा मुद्दा हाल्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई दुःख दिने वादी तथा साक्षी पनि अब कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।
श्रावण १८, २०७७ सविता विमली
अदालतसम्म आइपुग्ने विवादको तथ्यपरकताका सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैंलाई थाहा होला नि वकिल सा’ब, तपाईंहरूले कस्ता मुद्दा लेख्नुहुन्छ भनेर ! तपाईंहरूकहाँ झुटा विवाद बोकेर मानिसहरू आउँछन् । तपाईंहरू झुटा मुद्दा लेख्नुहुन्छ, झुटा साक्षी बनाइन्छन्, झुटो बहस हुन्छ । सबै झुटो भए पनि न्यायालयबाट भने वास्तविक न्यायको अपेक्षा गर्नुहुन्छ । सबै कुरा झुटो भएपछि न्याय पनि झुटो हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ हामी बिर्सन्छौं ।’
यो आरोप झुटो हो श्रीमान् भन्न सक्ने साहसको प्रतिशत ममा कम छ । बस, सुनिरहन्छु । यसो किन भइरहेको छ ? किन इजलास यस प्रकारको आरोप लगाइरहेछ ? बेन्च र बारबाट बाहिर आइसकेपछि आम समुदायसम्म पुग्दा यो आरोपको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? यसको व्याख्या सचेत नागरिकहरूले कसरी गर्छन् ? कानुनी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको राय के छ यसमा ?
हामीकहाँ साबितीलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण नभएसम्म साबिती प्रमाणका रूपमा ग्राह्य नहुने अभ्यास छ । साबितीलाई न्यायका लागि गरिएको सहयोग भनेर तत्कालीन अवस्थामा अदालतले नमान्ने प्रावधानका कारण पक्षलाई बचाउन वा कम सजाय दिलाउनका लागि कानुन व्यवसायीहरूले पनि साबिती नगर्न प्रेरित गर्ने गरेको अवस्था थियो जुन अद्यापि छ ।
पञ्चायत व्यवस्थामा प्रहरीले गरेको ज्यादती तथा त्रासका कारण आरोपीले आफ्ना कुरा राख्नै नपाई जबरजस्ती अपराध कबुल गर्न लगाई चिसो कोठरीमा कुहाएको देखेर तर्सिएका तत्कालीन विधायकहरूले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि त्यसो हुन नदिन प्रहरीले लिएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा नलिने व्यवस्था गरे । कानुन व्यवसायीको रोहबरमा न्यायालयसमक्ष गरिएको बयान मात्र आधिकारिक तथा प्रामाणिक मान्न थालियो ।
यो ३० वर्षे पञ्चायती प्रहरीसँग भूमिगत रहेर राजनीति गरेका तत्कालीन नेताहरूको डर थियो । आजको दिनमा प्रजातान्त्रिक प्रहरी पनि ३० वर्षकै भइसकेको छ । ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको सेवा’ जस्ता लालित्यपूर्ण नारा बोकेको प्रहरीले समात्नेबित्तिकै ‘टर्चर’, ‘थर्ड डिग्री’ को प्रयोग गरेको खबर आउन कम हुँदै गएको पनि छ । समाजमा प्रहरीप्रतिको धारणा अब धेरै हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । र, अब आरोपीको अदालतको बयान मात्र प्रमाण मान्ने जुन प्रावधान छ, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्न ढिला गर्नु हुन्न । प्रहरीले पक्राउ गर्दाकै समयमा सरकारी वकिल तथा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि (कानुन व्यवसायी) को रोहबरमा आरोपीको बयान लिनुपर्छ जुन अदालतमा प्रमाण मान्न सकियोस् । यसका लागि कानुनी जनशक्तिको आवश्यकतालाई अहिले बढ्दै गएको कानुनी शिक्षाका उत्पादनले पूरा गर्नेछन् ।
राज्यले त्यति धेरै लगानी गरेर विकास गरेको अपराध–अनुसन्धानको प्रणालीलाई अधिकांश अवस्थामा अदालती प्रक्रियाले भुत्ते साबित गरिदिएको छ । त्यसैले त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको सफलता दर ५४.४९ प्रतिशत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट गरिएकामा ४७.३१ प्रतिशत, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट गरिएकामा ८५.७८ प्रतिशत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट गरिएकामा ७९.८८ प्रतिशत छ । समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६७.७० (२०७५/७६) प्रतिशत मात्र सफलता हात लाग्ने गरेको छ ।
नागरिकलाई संगीन आरोपमा डामिसकेपछि त्यसको पुष्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो । आरोप पुष्टि हुँदैन र उक्त व्यक्ति निर्दोष साबित भएर निस्कियो भने उसको व्यक्तिगत, पेसागत तथा सामाजिक जीवनमा पुगेको क्षति असाध्य महँगो हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यसको क्षतिपूर्ति भर्ने निकाय राज्य वा अनुसन्धानकर्मी को हो ?
कुनै आरोपमा राज्यले छोइसकेपछि उक्त व्यक्तिको बाँकी सामाजिक जीवन सहज भएको देखिँदैन । त्यो दाग अदालतले दिएको सफाइले मात्र धुन सक्दैन । सफाइपछि पनि सामाजिक लाञ्छना उसले आजीवन बेहोर्छ । जीवनभर जेलमा सड्नु नपरेकामा ईश्वरप्रति कृतज्ञ रहनु उसको नियति बनिदिन्छ ।
भर्खरै मात्र कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारको अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न आठ प्रहरीले त्यो मुद्दाबाट सफाइ पाए । गत असारमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित ६ जनाले ‘म्याच फिक्सिङ’ को आरोपबाट सफाइ पाए । यो मुद्दामा सफाइ पाए पनि आफ्नो खेल जीवनको उत्कर्षमा रहेका तत्कालीन कप्तानसहित अन्य आरोपीले २०७२ असोज २७ मा पक्राउ परेयता जे गुमाए, त्यसको पूर्ति केले हुन्छ ?
पोलिमर नोट प्रकरणमा केही समयअगाडि मात्रै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । ३३ केजी सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका उच्च दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू पक्राउ परे । केही प्रहरी साधारण तारेखमा रहेर तथा केही प्रहरी अझै थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । उनीहरू पनि निर्दोष साबित हुन सक्दैनन् भन्ने के आधार छ ? यस्तो अवस्थामा कुनै विवादमा आरोप लगाउँदाका आधार र निर्दोष साबित हुँदाका आधारमा केकति तादात्म्य हुनुपर्छ ? यति संगीन आरोप लागेका मानिस यति सजिलै निर्दोष साबित कसरी हुन्छन् ? यसरी आरोप झुटो ठहरिएपछि आरोप लगाउने निकाय/व्यक्तिले चाहिँ कुनै दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने हो ?
झुटो आरोप र न्यायको परिबन्दमा सायद हामी सबै छौं । यसबाट निस्कन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । लहड वा प्रतिशोधका नाममा मुद्दा हाल्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई दुःख दिने वादी तथा साक्षी पनि अब कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । झुटो मुद्दा हाल्ने व्यक्ति होस् वा राज्य, सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ र उक्त क्षतिबापतको शोधभर्ना गर्नुपर्छ । मुलुकी देवानी/फौजदारी संहिताले कसुर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर पीडितको उक्त राहत (क्षतिपूर्ति) सम्म पहुँच कतिको छ ? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
आरोपबाट पूर्णतः सफाइ पाउने अभियुक्तहरू पनि पीडित नै हुन् । तिनले अदालती प्रक्रियाका क्रममा गुमाएको अमूल्य समय र सामाजिक साखको पूर्ति कसरी हुन्छ ? वास्तविक पीडित र पीडित बन्न बाध्य भएका प्रतिवादीहरू सबैका नामको क्षतिपूर्ति बेहोर्न राज्य सक्षम छ ? राज्यको क्षतिपूर्ति कोष कति बलियो छ ? यो कोषका स्रोत तथा स्रोतका विकल्पको खोजी गर्न ढिलो भएन ?
कानुनमा रहेका यी प्रावधान समाजमा सञ्चार हुने गरी प्रयोग हुन बाँकी नै छन् । राज्यको अनुसन्धान प्रणालीले नागरिकको भरोसा जित्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरीको लोकतन्त्रीकरण तथा अनुसन्धान प्रणालीमा केकति कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । न्यायालयहरू फैसला उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र नबनेर वास्तविक न्याय सम्पादन गर्ने आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्छ । झुटो आरोप र झुटो न्यायको प्रकोपबाट समग्र न्यायप्रणाली अब बाहिर निस्कनुपर्छ ।
ट्विटर : @bimalisabita
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:२५
योजना कमलपोखरीमा, ‘सुन’ लेपन न्युरोडमा
श्रावण १८, २०७७ मातृका दाहाल
काठमाडौँ — सुन तस्करीमा संलग्न बाराका इल्ताफ हुसेन अन्सारी र भारतको गुजरातदेखि आएको आपराधिक समूहले न्युरोडका एक कालिगढमार्फत १५ केजी चाँदीमा सुनजस्तो देखिने पहेंलो जलप लगाएको खुलेको छ ।
कमलपोखरी अपार्टमेन्टमा बसेर तस्करी र लुटपाटको योजना बनाएका अन्सारीले न्युरोडमा केही साताअघि नै मनिस मल्लिकमार्फत चाँदीमा जलप लगाएर पहेंलो धातु तयार पारेको पत्ता लागेको हो । शुक्रबार नियन्त्रणमा लिइएका मनिसले यसबारे प्रहरीलाई खुलासा गरेका थिए, उनी सोही दिन साँझ रिहा भएका छन् ।
सो धातु वीरगन्ज हुँदै गुजरातसम्म पुर्‍याउने योजना रहे पनि सूचना बीचमै चुहिएपछि अन्सारी मंगलबार सामान छोडेर सुन्धाराबाट भागेका थिए । प्रहरीले सोही ठाउँबाट १५ केजी पहेंलो धातु, ७ सय ५० ग्राम असली सुन र २ थान पेस्तोल बरामद गरेको थियो । ‘वीरगन्ज वा भारततिरै सामान लगेर बेच्ने रणनीति रहेको अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन्छ तर बीचमै सूचना चुहिएपछि अन्सारीको योजना विफल भयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने, ‘आफू पक्राउ परिने डरले सामान घुमुवा प्रहरीलाई दिएर ऊ फरार भएको हुन सक्छ ।’
महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका दुई जना घुमुवा बहादुरसिंह कठायत र प्रसन्न श्रेष्ठले ‘सेटिङ’ मा अन्सारी, उनका सहयोगी सञ्जय पटेल र निलेश सखियालाई बा६च ५५१९ नम्बरको स्कार्पियो गाडीसँगै भगाएका थिए । घटनाको अघिल्लो दिन घुमुवाले लाजिम्पाटमा गरगहना सफाइ गर्ने पसल सञ्चालक कौशल पटेल र देवानसिंह पटेलमार्फत यसबारे सूचना पाइसकेका थिए । तर सामान नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाउनेभन्दा कौशल, देवान र घुमुवा प्रहरीले लुटपाट गरेर बाँड्ने योजना बुने । अर्कातिर डीएसपी रञ्जन दाहाललाई घुमुवाले यसबारे सूचना पनि दिए । तर सूचना दिएको रुट एकातिर, अन्सारी वीरगन्ज जान लागेको रुट अर्कै बताउँदा अन्योल थपियो । घुमुवाले डीएसपी दाहाललाई नक्सालको होटल मेरियट नजिकैबाट अन्सारीको समूह हात्तीसार हुँदै सुन बोकेर जान लागेको सूचना दिएका थिए । त्यहीअनुसार दाहालले तत्कालै प्रहरी टोली खटाए । तर सूचना दिएभन्दा विपरीत अन्सारी र उनीसँगै रहेका अन्य दुई सहयोगी कमलपोखरी अपार्टमेन्टबाट सीटी सेन्टर–कृष्ण पाउरोटी–कमलादीबाट घण्टाघर हुँदै निस्किए । अन्सारीलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेन । डीएसपी दाहाल अत्तालिँदै घुमुवालाई गाडी पिछा गर्न आदेश दिए । प्रसन्न र बहादुरसिंह गाडी पछ्याउँदै अघि बढे । तर गाडी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अन्सारीबाट सामान फुत्काएर गायब बनाउने रणनीति घुमुवाको थियो । घुमुवा प्रहरीलाई लेपन गरिएको नभई सक्कली सुन भन्ने सूचना आएको थियो ।
केही मिनेटमै सहिदगेट अगाडि गाडी रोकेर निलेश सखिया ओर्लिए । प्रसन्न र बहादुरसिंहलाई झोला दिएर अन्सारी र सञ्जय पटेलसँगै निलेश त्रिपुरेश्वर हुँदै भागे । गाडी अन्सारीले चलाएका थिए । बहादुरसिंहसँग भएको झोलाबाट प्रसन्नले एक केजीको बिस्कुट निकाल्न भ्याइसकेका थिए । झोला हात पारेका घुमुवाले यताउता हेर्दै गर्दा डीएसपी दाहाल आकासे पुल नजिकैको माइक्रो स्टेसन नजिक आइपुगे । ‘झोलामा के हो’ भनेर डीएसपीले सोधे । ‘बाटोमा सुन फ्याँकेर गाडी भाग्यो’ भनेर घुमुवाले भनेपछि डीएसपीले त्यहींबाट ‘मेट्रो कन्ट्रोल’ मा गाडी नम्बर टिपाए । घुमुवासँग भएका अर्का व्यक्ति देखाउँदै ‘ऊ को हो’ भनेर सोधेपछि प्रसन्नले ‘सुराकी दिने मानिस उमेश श्रेष्ठ हो सर’ भनेर ढाँटे । प्रसन्नले केही समयअघि निकालेको एक केजी पहेंलो धातु सुराकी भनिएका उमेशलाई दिइसकेका थिए । उनी बागबजारमा मोबाइल पसल सञ्चालन गर्छन् ।
घुमुवासँग भएको सामानबारे डीएसपी दाहालले त्यहीँबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्याम ज्ञवालीलाई जानकारी गराए । ज्ञवालीले अनुसन्धानमा असर पुग्ने भन्दै सामान भेटिएको सक्कली ठाउँ कमलादी उल्लेख गर्न लगाए । तर घटनाको मुचुल्का भने सुन्धारा नै उल्लेख गरियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनसेवा प्रहरीलाई साक्षी राखेर मुचुल्कामा घटनास्थल सुन्धारा राखियो । सामान बोकेर त्यहीँबाट डीएसपी दाहाल परीक्षण गराउन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको कार्यालय पुगे । अनि मात्रै थाहा भयो, तस्करीको सामानमध्ये १५ केजी चाँदीमा लेपन गरिएको रहेछ, ७ सय ५० ग्राम सुन मात्र असली रहेछ । एसएसपी ज्ञवालीले त्यसको केहीबेरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कमलादीबाट सामान र हतियार बरामद गरिएको जानकारी दिए । तर प्रहरीले किन घटनास्थल ढाँट्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वी नवलपरासी प्रहरीको सहयोगमा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले निलेश, देवान र अपार्टमेन्टका काम गर्न ल्याइएका विजय पटेललाई दुम्कीबासबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूको बयानका आधारमा दुवै घुमुवा प्रहरी, कौशल र उमेश पक्राउ परे । तर घटनाका मुख्य योजनाकार अन्सारी र उनका सहयोगी सञ्जय पटेल फरार छन् ।
पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार कौशलले घुमुवा प्रहरीलाई सूचना दिएर सामान अन्सारीबाट लुट्ने र त्यसबापत कौशलले घुमुवालाई १५ लाख दिने सहमति भएको थियो । त्यही कारण डीएसपी दाहाललाई घुमुवाले सही सूचना नदिई अन्सारी हिँड्ने रुट नै अन्यत्र देखाएको खुलेको छ । तर घुमुवा र लाजिम्पाटमा व्यापार गरी बस्ने पटेलबीच सेटिङ भत्किएपछि सबै योजना भताभुंग भएको स्रोत बताउँछ । घुमुवाले सके घटना लुकाउने, नसके सामान बरामद गरेर त्यसको कमिसन बाँड्ने, त्यो पनि योजना विफल भए सामान बरामद गरेर डीएसपीलाई बुझाएर काम देखाउने तीन वटा रणनीति अपनाएको बयान दिएका छन् ।
फरार भएका अन्सारी २०७२ जेठ ३० मा जाली नोट कारोबारको अभियोगमा सातदोबाटोबाट पक्राउ परेका थिए । ललितपुर जिल्ला अदालतले २०६७ जेठ २६ मा दोषी ठहर गर्दै अन्सारीलाई ३ वर्ष कैद र २ करोड ६१ लाख ९ हजार बिगो कायम गरेको थियो, फैसलाको ५ वर्षपछि पक्राउ परेका उनी कैद भुक्तान गरी छुटेका थिए । त्यसपछि उनी सुन तस्करीमा ‘सिफ्ट’ भएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:१६